यीनै हुन २ युवा जसले गएराति गुल्मीमा ट्रक’को ठ’क्करबाट घटना स्थलमै ज्या’न गुमाए ! – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/यीनै हुन २ युवा जसले गएराति गुल्मीमा ट्रक’को ठ’क्करबाट घटना स्थलमै ज्या’न गुमाए !
नारायणगढबाट लोथरतर्फ गइरहेको ना६ख २३९८ नम्बरको ट्रिपरले विपरीत दिशाबाट आइरहेको बा४१प ८६४३ नम्बरको मोटरसाइकललाई ठ’क्कर दिँदा तामाङको मृ’त्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ । ट्रिपरको ठ’क्करबाट घाइते तामाङको उपचारका क्रममा भरतपुर अस्पतालमा मृ’त्यु भएको हो । दुवै सवारी साधन र ट्रिपर प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका छन् ।
श्रीमान श्रीमतीको यस्तो दुखद मृत्यु, बुवाको मृत्यु पछि बसेका थिए किरिया